Mahita ny Blue Yeti | Martech Zone
Mahita an'i Blue Yeti
Alatsinainy, Novambra 22, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
The Martech Zone onjam-peo fandaharana dia nitondra mpihaino marobe (1,500 XNUMX mahery!) ary nanjary nalaza isan-kerinandro. Miaraka amin'ny lazan'ny olona ihany koa ny fitsikerana… ary Dave Woodson, podcaster efa za-draharaha, nanome fotoana sarotra (mendrika) momba ny kalitaon'ny podcast anay. Nampiasa a Mikrofona USB Snowflake USB ao amin'ny biraonay - izay tsy fampiasa amin'ny acoustics mihitsy.
Ny valiny dia noraisin'ny mikrôfôna ny paompy rehetra teo ambony latabatra, ny kiakan'ny vata fampangatsiahana anay, ary ny kalitaon'ny tin-canny. Ao amin'ny efitrano mangina misy fitaovana mpitroka, mahomby tokoa io mikrô io. Indrindra fa azo entina izy ary afaka mivezivezy ao anaty kitapo anao. Taorian'ny dia nandritra ny herintaona dia nipoitra ny efijery ary nitaky doko aho hametahana azy io indray. Fotoana mikrô vaovao!
Nanoro hevitra an'i Blue i Dave Mikropon USB Yeti ka napetrakay avy hatrany tamin'ny filaminana satria mora vidy… 100 $ fotsiny. Tonga talohan'ny dinika farany nataontsika tamin'ny radio Fampisehoana mailaka vaovao an'ny Facebook miaraka amin'ireo matihanina amin'ny indostria sasany.
Wow, biby goavambe! Niasa mahafinaritra ny mikrô ary nihatsara kely ny kalitaon'ny fampisehoana. Mbola mino aho fa manana olana vitsivitsy isika amin'ny latabatra vy sy efitrano fandraisam-peo ataontsika ao an-tsehatra… fa hanohy hanatsara azy hatrany izahay rehefa mandeha ny fotoana. Misaotra betsaka an'i Dave tamin'ny tolo-kevitra.
Ny mikrô dia manana fomba fiasa 4 arakaraka ny mpihaino anao. Izy io dia manana toerana maro, miankina amin'ny toerana misy ny feo ezahinao alaina - stereo, kardôma, omnidirectional ary bidirectional. Ity misy fanazavana ny Fikirana Yeti sy fampiharana avy amin'ny tranokalan'i Blue:
Hanohy hiasa amin'ny birao izahay hanatsara ny akustika, saingy tsy manana ahiahy aho fa nahita ny mikrôfônika podcasting marina izahay. Ity dia fitaovana lehibe iray amin'ny vidiny mahafinaritra!
Tags: Podcast Marketingmikrô
Fitaovana fampiroboroboana wireframe lasa mifanakalo
Bilaogin'orinasa: Ny hira rap